यी हुन् महान चेली- जसले बाटोमा अलपत्र परेका बृद्ध बृद्धा र बच्चाहरुलाई ११ बर्षदेखि पाल्दैछिन् (भिडियो हे’र्नुहोस) – Paluwa Khabar
यी हुन् महान चेली- जसले बाटोमा अलपत्र परेका बृद्ध बृद्धा र बच्चाहरुलाई ११ बर्षदेखि पाल्दैछिन् (भिडियो हे’र्नुहोस)
असार १०, २०७८ बिहिबार 98
दुखी : गरिब पिडित की आमा विप’दकाे बेला नाम लिनै पर्यो भने रिमा सापकोटा साइराम नि’र्धक्क लिनु होला। देश भित्र भूकम्पकाे बेला हाेस या फेरी बाढीप’हिरोले घरस’न्तान बगाउँदा हाेस, कोरोनाका कारण लकडाउन हुदा म’जदुरी गरेर खाना खान नपाउँदा, जो आर्थिक अभा’वका कारण उपचार गर्न नपाउँदा, वा विभिन्न रोग वा भैपरि आउने बिरामी, सधै सधै तत्प’र र त’ल्लिन रहने नाम हो रिमा सापकोटा साइराम ।
हुन् त धेरै दर्शक हरुले चिन्नु हुन्छ रिमा सापकोटा एक बिशे’ष समाज सेवी एउटी आमा को कथा फेरी पनि हामीले उहा संग सं’घर्ष को यात्रा कसरी सम्भव भयो यो समाजसेवा को उच्च स्थान मा पुग्न । नाम रिमाकाे अर्थ त बुवाआ’माले कसरी राखिदिनुभयो थाहा भएन तर यसकाे अर्थ मानव कल्या’ण भन्दा अर्काे पक्कै छैन भन्दा हुन्छ ।
अरू धेरै केहि भनिन वहाँ पी’डितहरूका लागि त जिउँदो भगवान हुनुहुन्छ । जस्तोसुकै अप्ठे’रोबाट पार लगाउने एक मात्र देव वा देवी हुन् रिमा सापकोटा साइराम । लकडाउनको स’मयमा पनि रिमाले आफ्नो सेवा निरन्तर राखिन ।
परिवार बिहिन ४० जना आमा बुवा र नानी बाबुहरुलाई आ’श्रममा राखेर उनीह’रुको सेवा मात्रै गरिनन्, बाटोमा रहेका पशुपँक्षीहरुको पनि सेवामा लागिन् । यस बिचमा उनीसँग तिता मिठा अनुभ’व त कत्ति छन् कति । रिमाले आँखा’भरी आँशु लिएर यस्तो भनिन् । भिडियो हेर्नुस
Prevएक हप्ताको लागि फेरि थपियो निशधाज्ञा – यस्ता छन नयाँ नियमहरु ! आफुपनी पढेर सेयर गर्नुहोला।
Nextभर्खरै शिक्षा मन्त्रालयबाट कक्षा ११ को परीक्षाबारे आयो यस्तो महत्वपूर्ण सुचना (हेर्नुहोस् विज्ञप्ति)
बि’चरी मञ्जु ! अन्तिम प्रा’ण जाने बेलासम्म पनि आमासँग फोनमा बोलिरहेकी थिइन् (भिडियो
औँठी र सिक्री सानो भएको भन्दै विहे गरेको २७ दिनमै २३ वर्षिया बिष्णु बराल (क्षेत्री) को यो हालत